Obi Ụtọ 2 afọ 2 izu gara aga #1118
Dị ka aha njirimara m na-egosi na agafeela 60. Ahụmịhe ụgbọ elu ụwa m nwere bụ ogologo oge gara aga na Chipmunk na Vickers Varsity. Amalitere m ụgbọ elu siming ụfọdụ afọ 16 gara aga na FS otu narị afọ nke ụgbọ elu na pc sitere na PC ụwa. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ejirila m ihe siri ike na ngwanrọ na ngwaike, na-agba mbọ ka ọ bụrụ eziokwu. Enwere m ugbu a n'elu PC etiti etiti na Chillblast. Oculus VR na okirikiri orbx. A zụtara PC m PC July 2017 wee soro Windows 10. M tinye FSX Steam n'ime. Ihe ndị a niile na-achụ otu ọsọ ụgbọ elu. Ndi Douglas DC3. Naanị ihe akụkọ Flight nke Flight zuru oke, dịka m bi na licolnshire na-adịghị anya RAF Coningsby na Battle of Britain Memorial Flight na Dakota ZA947. Abụ m onye ọbịa na Duxford na ụwa niile na ụwa siming. Enwere freeware mara mma nke nwere nhọrọ igosi ikuku ka m nwee ike fega n'akụkụ ebe e wusiri ike 'Sally B'. Ihe niile dị mma na ụwa m mana nke a na-abịa na nnukwu akụ. FSX Steam kpebiri na ọ gaghị egwu mma na Windows 10. N'ihi ya, agbajịrị m mgbọ ahụ wee gbanwee P3D V4. Lee Legends nke Flight DC3 agaghị abanye n'ime P3D. Duxford na-akwụghị ụgwọ ga-emekwa. Yabụ ịchọta C47 gị bụ ihe ndozi kpam kpam. O zuru oke, a ga m amata dịka m banyere n'ụra Dakota. Ọ dị mma na isi adịghị. Ma dika ezigbo ihe di ka sim nwere ike inweta. Naanị nkatọ m, ọ nweghị niggles, bụ ụda ma ọ bụ enweghị ya maka ngbanwe na pọmpụ mmanụ na-eti mkpu. Ana m efe paratikal ahụ ma ọ ga-amasị m na agba RAF. N'afọ na-esote n'ime ụwa n'ezie, a ga-enwe Daks karịrị ndị Normandy na-agbada parachutist na Normandy ọdịda saịtị. M ga-N'ezie-efe efe a Sim version. Enwekwara m anya inweta njem na Dakota. Ma ọzọ na-ekele gị maka Dakota a magburu onwe ya nke m ga-eji ọ paidụ kwụọ ụgwọ ya.
Obi Ụtọ 2 afọ 2 izu gara aga #1119
Daalụ maka nkwalite ọma gị. Anyị nwere obi ụtọ na ị nwere ike ịkwado C47 n'enweghị nsogbu ọ bụla. Bịanụ na ngalaba.